သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ခြေလှမ်းသစ်
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 10:36 PM
အရင်တည်းက စိတ်ထဲမှာ ဆန္ဒဖြစ်နေတာ. မလေးရဲ့စာလေးတွေကို ပုံနှိပ်စာလုံးလေးတွေနဲ့ စာအုပ်ပုံစံလေး သိမ်းထားလို့ရရင် သိပ်ကောင်းမှာလို့.
၀ယ်ထားလိုက်မယ်. ၅၀၀ ပဲရိုက်တာဆိုတော့ ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားမယ်လို့ ထင်တယ်.
ရှေ့လျှောက်လည်း ဒီ့ထက်မက ပိုပြီး ရသမြောက်တဲ့စာပေလေးတွေ ရေးသားဖန်တီးနိုင်ပါစေ...
နောက်ဆုံးတော့ မလေးရဲ့ အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့ပြီနော်.
အားပေးတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲဆိုတော့ အုပ်ရေ ၅၀၀ ဆိုတာ ခဏလေးနဲ့ ကုန်သွားမယ်ထင်တယ်. ဒုတိယအကြိမ် တတိယအကြိမ်တွေ ရိုက်နိုင်ပါစေဗျာ.
ရှေ့လျှောက်လည်း ရသမြောက်တဲ့ စာပေလေးတွေ ဆက်လက်ရေးသားဖန်တီးနိုင်ပါစေဗျာ....
နာမည်ကျော်စာရေးဆရာမကြီး ဖြစ်သွားရင် ကျွန်တော်တို့လို အညတရ ဘလော့ဂါလေးတွေကို မေ့မသွားနဲ့နော့...